प्रदेशमा किट र अक्सिजन सिलिन्डर अभाव «
प्रतिनिधिसभा सांसद तथा पूर्वमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले सोमबार ताप्लेजुङ केन्द्रित गरी कोभिड–१९ विषयक भर्चुअल बैठक आयोजना गरे । बैठकमा जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा. सोनिङ लामाले एन्टिजेन किट माग गरे । डा. लामाले भने, “संक्रमण बढेसँगै परीक्षणका लागि आउने क्रम बढ्दो छ । तर अस्पतालमा किट छैन ।” अस्पतालमा १० बेडको उपचार कक्ष भएकाले वृद्धि गर्नुपर्नेमा डा. लामाले जोड दिए । उनले भने, “जिल्लामा फुङलिङ नगरपालिकामा देखिएको संक्रमणले यतिका अत्यायो । बाँकी ८ वटा स्थानीय तहमा यतिका संक्रमण भए अवस्था कस्तो होला ?”
प्रदेश नं. १ का सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द कार्कीले प्रदेशमा पनि किट र अक्सिजन सिलिन्डर अभाव रहेको बताए । यद्यपि स्विस सरकारसँग ५ हजार एन्टिजेन किट माग गरिएको सचिव कार्कीले जानकारी दिए । सचिव कार्कीले भने, “स्विस सरकारबाट ग्रिन सिग्नल पाएका छांै । उपलब्ध भएलगत्तै वितरण गर्छौं ।” प्रदेश आपूर्ती व्यवस्थापन केन्द्रमा ३० वटामात्र अक्सिजन सिलिन्डर छ । चीनबाट ल्याइएको भनिएको खाली अक्सिजन सिलिन्डर प्रदेशमा १ हजार वटा माग गरिएको छ । कार्कीका अनुसार उपलब्ध भएमा वितरण गर्ने तयारी छ । प्रदेशमा ५ वटा अक्सिजन कम्पनीले अन्य प्रदेशमा पनि निर्यात गर्ने गरेको छ । सचिव कार्कीले भने, “प्रदेश सरकारले ३ वटा कम्पनीसँग सम्झौता गरे पनि सहज उपलब्ध भएको छैन । किनकि अन्य प्रदेशमा निर्यात गर्ने भएकाले समस्या छ ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. महेन्द्र श्रेष्ठले किट र सिलिन्डर तत्काल प्रदेशमा पठाउने दाबी गरे । चीनबाट १ हजार ८ सय वटा खाली अक्सिजन सिलिन्डर तातोपानी नाकामा आएको उनले बताए । देशभर सिलिन्डरको माग उच्च रहेकाले आपूर्ति भएका स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । डा. श्रेष्ठले भने, “बरु पोजेटिभ देखिएका बिरामीको १४ दिनपछि परीक्षण गर्नुपर्दैन । यद्यपि सावधानी अपनाउँदै स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिनुपर्छ ।” जिल्ला–जिल्लामा पीसीआर ल्याब असम्भव छ । डा. श्रेष्ठले भने, “पायक पर्ने सबै जिल्ला र स्थानीय तहले लगानी गरौं । र, पीसीआर ल्याब चलाउन सहज हुन्छ ।” पीसीआर ल्याब स्थापना गर्न महँगो, जनशक्ति अभाव र सामग्री पाउन मुश्किल हुन्छ ।
सिदिङ्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर कडरियाले स्वाब संकलन गरेर पठाएकाको पीसीआर रिर्पोटका लागि ४ दिनसम्म कुर्नुपरेकोमा गुनासो गरे । अध्यक्ष कडरियाले भने, “दुर्गमका नागरिकको स्वाब संकलन गरेर पठायो । तर पीसीआर गर्नका लागि पनि भनसुन गर्नुपर्छ ।” प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले जिल्लाको संक्रमण अवस्थाबारे प्रस्ट पारे । मृत्यु भएका सक्रमितको शव व्यवस्थापनका लागि शववाहन अभाव भएको प्रजिअ पाण्डेले बताए । सवारी साधनसमेत भाडामा पाइँदैन । डा. सन्दुक रुइतले अब देशमा परीक्षणसँगै भ्याक्सिनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । जिल्लाबासी तथा देशका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सहयोगका लागि आवश्यकताबमोजिम पहलसमेत गर्ने रुइतले बताए ।